Ikhaya > Imikhiqizo > Anesthesia Breathing
(Yonke imikhiqizo engu-7 ye-Anesthesia Breathing)
I-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. ingenye yezinto ezine-Anesthesia Breathing ezihola phambili e-China. Yimboni & umphakeli onguchwepheshe wokwenza Anesthesia Breathing. Nikeza ikhwalithi ephezulu Anesthesia Breathing ngentengo ephansi eshibhile.
I-Diskable Spirometry Breathing System Filter
Intengo yokukodwa: USD 0.466 / Piece/Pieces
Tag: Isihlungi se-Breathing System , I-Spirometry Filter , Isihlungi esilahlekile
I-Diskable Spirometry Breathing System Filter Igama lomkhiqizo: I-Spirometry Filter Inombolo:
I-Price Good PVC Ecacile I-Medical Anesthesia Face Mask
Ukupakisha: 1pc / PE Pack, 100pcs / carton
Tag: I-Anesthesia Face Mask , Anesthesia Mask , Inani Elihle PVC Anesthesia Mask
I-Price Good PVC Ecacile I-Medical Anesthesia Face Mask Igama lomkhiqizo : I-Anesthesia Face Mask Inombolo No .:
I-General Anesthesia Catheter Kit CE evunyelwe
Tag: I-Anesthesia Catheter Kit , I-Anesthesia Catheter elahlekile , I-EC evunyelwe yi-General Anesthesia Catheter
I-General Anesthesia Catheter Kit CE evunyelwe Igama lomkhiqizo : Ukulahlwa Kakhulu I-Anesthesia Catheter Kit Inombolo No .:
I-Epidural Anesthesia Catheter
Tag: I-Catheter ye-Anesthesia Epidural Cayible , I-Cathéter Epidural Cashter Ejwayelekile (Standard Tips Epidural Catheter) ene-Eye Lateral Eye Inalutho , I-Catheter ye-Vertebral Epidural Anesthesia ene-Connector
Igama lomkhiqizo: I-Epidural Anesthesia Catheter Into: CL-IJ0018 Imininingwane: CL-IJ0018 I-Epidural Anesthesia Catheter Inzuzo Yenkampani Yethu 1. Imikhiqizo yezokwelapha ezisebenzayo zenza iminyaka engaphezu kwengu-10 2. Ikhwalithi ephakeme...
Anesthesia Breathing ukuthengiswa okuvela ku-China, Ukuthengiswa Okuqondile kusuka kubakhiqizi beChina abaholayo emanani entengo eshibhile. Thola imikhiqizo engu-Anesthesia Breathing eningi ku-Ningbo Cland Medical Instruments Co., Ltd. futhi uthole izinga eliphakeme le-Anesthesia Breathing ngokuqondile kusuka ku-Anesthesia Breathing abathengisa abathengi nabathengisi abathembekile. Thumela izidingo zakho zokuthenga & Thola impendulo ngokushesha.